YEYINTNGE(CANADA): Saturday, July 14
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/14/20120အကြံပြုခြင်း
by Myo Set on Tuesday, June 26, 2012 at 9:01pm ·
DVB သတင်းဌာနအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားရိုဟင်ဂျာတွေဖက်က လုံးဝရပ်တည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဗမာတွေမဖတ်တဲ့ ဒီလိုသတင်းမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေကို လျစ်လျူရှု၊ ဘာတီးလ်လင်တနာတို့နဲ့ Jihad Watch တွေက သတင်းရင်းမြစ်တွေရယ်၊ States Department က အစီရင်ခံစာ (ဝီကီလိခ်ကေဘယ်လ်မဟုတ်) တွေကိုလျစ်လျူရှုပြီး အမေရိကန်သံရုံးရန်ကုန်ရဲ့ ဝီကီလိခ်ကေဘယ်လ်မှာဖော်ပြထားချက်တွေဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုခြင်းကို ပြသဟန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဟာကို အလေးအနက်ထားဖော်ပြသွားပါတယ်။
(၂) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာကော်မစ်ရှင်နာမင်းကြီးတို့က ဝန်ခံပြောဆိုနေတပေမယ့် "ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေဆိုတာ သက်သေမရှိဘူး" လို့ ခပ်ပြောင်ပြောင်ပဲ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံသတင်းဌာနရဲ့ အောက်ပါဆောင်းပါးမှာ ခုခံကာကွယ်သွားပါတယ်။
(၃)ရခိုင်အရေးအခင်းကာလအတွင်းမှာ လူဖတ်များခဲ့တဲ့ Hmuu Zaw ရဲ့စာမျက်နှာပါဖော်ပြချက်ကိုလည်း "ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအပြတ်ရှင်းရေးစီမံချက်" အနေနဲ့ ဖော်ပြသွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သက်သေပြချက်ကတော့ RFA သတင်းဌာနပါ ရဟတ်ယာဉ်များက နတ်မြစ်ပေါ်က ရိုဟင်ဂျာများကို ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းမှာ ဘယ်ဖက်က ရဟတ်ယာဉ်မှန်းမသိကြောင်းအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် သတင်းရေးသူ Joseph Allchin ဟာ မြန်မာဖက်က ပစ်ခတ်လိုက်ကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ သက်သေအတိအကျမရှိဘဲ ဒီလိုဖော်ပြခြင်းဟာ သတင်းထောက်ကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီညွတ်ပါသလား။
(၄) DVB သတင်းဌာနအနေနဲ့ အရှက်ကင်းမဲ့စွာ တာဝန်မဲ့ဖော်ပြမှု ကတော့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ဒီအရေးအခင်းအပေါ်မှာ ပေးခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကို ပြန်လည်ဝေဖန်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်က "အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမထောက်ပါနဲ့။ အားလုံးဝိုင်းဝန်းတာဆီးကြရပါလိ့မယ်" လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်က မီဒီယာတွေကို "ဘာသာရေးပဋိပက္ခ"အသွင်မဖော်ပြဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အင်အားကြီးသူက အင်အားနည်းသူကို ခြိမ်းခြောက်တာမျိုးတောင် မလုပ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို စာရေးသူက ဒီလိုရေးပါတယ်။ ရှုစားကြည့်ပါ။
"Ko Ko Gyi’s prominent colleague Min Ko Naing,anom de guerre which translates to ‘Conqueror of Kings’, was more measured but with no sense of irony when he said, “it is most important to prevent incitement that would cause riots.”
အထက်ပါအတိုင်း စာရေးသူ Joseph Allchin ကဖော်ပြခဲ့တာပါ။ သူရဲ့ အပေါ်စာကြောင်းမှာ ၁၉၈၈ နဲ့ ၂ဝဝ၇ တော်လှန်ရေးများလို့ မသုံးဘဲ ယခုရခိုင် အေ၇းအခင်းနဲ့ ထပ်တူ ထိုဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးများကို Riots (အဓိကရုန်းများ) လို့တင်စားထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
အဓိကရုန်းတွေ မလုပ်ဖို့ မင်းကိုနိုင်ကပြောပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် ၁၉၈၈ နဲ့ ၂ဝဝ၇ အဓိကရုန်းတွေကို စတင်လှုံ့ဆော်ခဲ့သူမို့ အဖမ်းခံရတာပါပဲ ဆိုပြီး စော်ကားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး မွတ်စလင်မ်တွေကိုမို့ နှိပ်စက်နေပါတယ်လို့ အစဉ်တစ်စိုက်အောက်ဟစ်ခဲ့တဲ့ ဒီသတင်းဌာနဟာ ရိုဟင်ဂျာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဝေနှင်းပွင့်သုန်(ဘားမားကန်ပိန်းယူကေ) ရဲ့ အဖေ မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံရေးသမား ကိုမြအေး ရဲ့ ရခိုင်တွေအပေါ် ရိုဟင်ဂျာတွေကျုးလွန်တာကို လုံးဝ လက်မခံကြောင်းနဲ့ "ထိထိရောက်ရောက်" အရေးယူပေးဖို့ ပြောသွားတာကိုတော့ "ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ" လျစ်လျူရှုသွားတာကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မီးရှို့မှုများလို့ ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် ကူတောင်ကျေးရွာ၊ ရသေ့တောင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ၇ခိုင်ဆယ်ဦးအသတ်ခံရတဲ့အရေးအခင်းကိုတော့ "ထုံးစံအတိုင်း" မသိချင်ယောင်ဆောင်သွားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဆင်းရဲလှတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ရှစ်သိန်းက မြန်မာ့အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးနိုင်မယ်လို့ထင်နေရင် ထိုင်းမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ်နေနေတဲ့ မြန်မာတွေက ထိုင်းနိုင်ငံကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးပြီ ဆိုပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းဆက်စပ်မှု၊ မူဂျာဟစ်တွေနဲ့ ဘူးသီးတောင်ဒေသလုံခြုံရေးကို မသိနားမလည်ဘဲ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကို စော်ကားလိုက်ခြင်း၊ မြန်မာလူထုတစ်ရပ်လုံးကိုစော်ကားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးကို မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာမတွေ့ရပါ။ ဒါဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ကြံတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေက အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရှုသူတွေသာ ဖတ်မိပြီး ပြည်တွင်းက ပရိသတ်တွေကို နားလှည့်ပါးရိုက်လုပ်ဖို့ ကြံစည်တာဆိုတာ သိပ်ကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ဟန်ယောင်ဝေ အာရပ်တွေနဲ့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ DVB ခေါ် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံဟာ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလားများဖက်မှသာ တောက်လျှောက်ရပ်တည်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားများကို စော်ကားလိုက်ပြီ၊ ဗမာများနဲ့ ကျန်ပြည်ထောင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ထိုးနေပြီဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးက သက်သေပြနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ကလင့်ခ်ထဲက ဆောင်းပါးကို သေသေချာချာ ဖတ်ကြစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နော်ဝေအစိုးရထံ တရားဝင်ကန့်ကွက်လွှာပို့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်မခံဘူးဆိုတာကို ပြောလိုက်အပြီးမှာ သူတို့ကို ပြည်ပမီဒီယာတွေက တိုက်ခိုက်လာတော့မယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းကြတဲ့အတိုင်း စတင်တိုက်ခိုက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/14/20123အကြံပြုခြင်း
by Yangon Press International on Saturday, July 14, 2012 at 8:45am ·
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထုတ်7Days Journal တွင် ဖော်ပြသော စာရေးသူ ငြိမ်းငြိမ်းနိုင်၏ ဆောင်းပါး
အန်ဂျီအို တစ်ချို့ နိုင်ငံတော် ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေဟု ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစိုးရမှ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြား
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံတွင် အန်ဂျီအို တစ်ချို့သည် နိုင်ငံခြားမှ ငွေကြေးများဖြင့် နိုင်ငံတော်အား ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ငန်း တစ်ချို့တွင် ပါဝင်နေကြောင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစိုးရက တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ယမန်နေ့က ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားလိုက်သည်။
အန်ဂျီအိုများကြောင့် ဘင်္ဂလီ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်းများ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
“ ဒီနိုင်ငံက အန်ဂျီအို တစ်ချို့ဟာ နိုင်ငံတော်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကျင့်သုံး လုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်” ဟု ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လူမူရေး ၀န်ကြီးက Enamul Hoque Mostafa shahid မနေ့က ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားသည်။
သို့အတွက် အန်ဂျီအို ၅၀၀၀အား မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းအန်ဂျီအိုများသည် နိုင်ငံတော်အား ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ရပ်များကို ဆောင်ရွက်နေ၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ရသလို တစ်ချို့ အန်ဂျီအိုများမှာ ငွေအသုံးစာရင်းများကို စနစ်တကျ မတင်ပြနိုင်၍ ဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
ထိုအထဲမှ တချို့ အန်ဂျီအိုများကို လုံးဝ ပိတ်ပစ်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
သို့အတွက် လက်ရှိ အစိုးရ အနေဖြင့် အန်ဂျီအိုများအား ထိန်းကျောင်းမည့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဥပဒေ တရပ်ကို ပါလီမန်တွင် ပြဌာန်းရန် စီစဉ်နေကြောင်း သူက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ရှိ အန်ဂျီအိုများကို အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်း လက်အောက်တွင် ထားရှိပြီး သူတို့၏ လုပ်ဆောင်နေမူများအား (အထူးသဖြင့် စစ်သွေးကြွများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမူ)များကို စောင့်ကြည့်ရန် အစီအစဉ်များလည်း ပြုလုပ်နေကြောင်း သူက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစိုးရမဟုတ်သော အန်ဂျီအို အများဆုံး တည်ရှိသော နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အန်ဂျီအိုများကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မူကို များစွာ အထောက်အကူ ပြုခဲ့သလို တခြားတဘက်တွင်လည်း မူမမှန်သော အန်ဂျီအိုများ၏ နိုင်ငံတော် ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာမူများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာ လွတ်မြောက်ရေးကို လျှို့ဝှက်စွာလှုပ်ရှားနေသော အေဇက်ဂျီ
သောကြာနေ့ လွတ်တော်မှာ ကျားဖြူပါတီက ဒေါ်နန်းဝါနု က လွတ်တော် အစီအစဉ်ထဲ ဆွေးနွေးဘို့ ပါဝင်ထားခြင်း မရှိပဲ ရုတ်တရက် အရေးကြီး တင်ပြစရာရှိလို့ပါ ဆိုပြီး ပါလာတဲ့ စာရွက်ကို ထုတ်ပြီး ပိတ်ဆို့မှု အကြောင်းကို ဆွေးနွေးသွားတာပါ။ လွတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်း ဒါ အရေးကြီးတယ် ဆိုပြီး ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
ယုဇန ဦးဌေးမြင့်ကလည်း အသင့်ပါလာတဲ့ စာရွက်တွေ ထုတ်ပြီး ထောက်ခံဆွေးနွေးပါတယ်။ ရခိုင်ဘက်က လွတ်တော်အမတ်ကလည်း ပါလာတဲ့ စာရွက်ထုတ်ပြီး ထောက်ခံ ဆွေးနွေးပါတယ်။ NLD အမတ် ဦးဝင်းထိန်က ထဆွေးနွေးမယ်လုပ်ပြီး မိုက်ကရိုဖုန်း ခလုပ်နိုပ်တာ မီးလင်း မလာခဲ့ပါဘူး။ နောက်က ခုံတွေမှာ သွားလင်းနေတယ် ပြောပါတယ်။ တော်တော်ကြာမှ ဖွင့်ပေးလိုက်၊ ဖွင့်ပေးလိုက် ဆိုပြီး စပီကာက အသံတွေကြားနေရကြောင်း ဦးဝင်းထိန်နဲ့ VOA ဆွေးနွေးခန်းမှာ ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
-- DD85 MMCP Scuba Som ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဗျာ..ကိုယ့်သောက်လုပ်ကို..ပီပြင်အောင်...မလုပ်ဖူး။အရေးတကြီးလုပ်ရမဲ့...ရင်းနှီးမြှုတ်နှံရေးဥပဒေက..အခုဘဲပြီးတော့မလိုလို..နောက် ၃ လ မှလိုလို..ဘာမှပီပီပြင်ပြင်မရှိသေးဘူး။ဇွတ်ကြီးခေါ်နေတယ်။ဘုန်းကြီးရူးနဲ့လှေလူးမပါဗျာ။ စကာင်္ပူက..ကမကထ လာလုပ်ပေးသွားတဲ့..စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှု..ဆွေးနွေးပွဲလုပ်သွားတဲ့..၂ ရက်..မှာ..လုပ်ငန်းရှင်တွေပြောသွားတာ..လိုအပ်ချက်တွေ..အများကြီး...အထူးသဖြင့်..ဥပဒေ ပီပီပြင်ပြင်...မရှိသေးတာကို..ပြောသွားတယ်။လွှတ်တော်ထဲ..သွားထိုင်ငိုက်တဲ့သူကငိုက်၊ ဒေါ်စုကို..ဂျောက်ချပြီးနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ဖို့...ဆင်ကြံကြံတဲ့သူတွေကကြံ။၂၀၁၅ အာစီယံ နိုင်ငံတွေနဲ့...အပြိုင်ကြဲဘို့ဆို..ဒီလို..အူကြောင်ကြား..လွှတ်တော် အမတ်တွေ..ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်..မြန်မာပြည်က..အများဆုံး...အခွန်လွတ်..တင်ပို့နိုင်တာဆို..”ဖာ” တွေဘဲ အများဆုံးဖြစ်မယ်ဗျို့..။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/14/20122အကြံပြုခြင်း
Aung Thu Ra........ အဲဒီကလေးမ ကိုတွေ့ ရင်ပြောပေးပါ ပြည်ပဆန်ရှင်းကကြောက်စရာမလို ဘူး ပြည်တွင်းဆန်ရှင်းပဲကြောက်တဲ့ Policy and Managment ကို Master ယူခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစိုးထွန်းနဲ့ ဒီနေ ညကပဲ ပြောနေတဲ့ KBZ ဒုဥက္ကဌဦးသန်းလွင် ကပြောပါသေးတယ် ဆန်ရှင်ကိုသိပ်မပူပါနဲ့ နန်းဝါနုလေးကိုပြောလိုက်ပါတဲ့လုပ်စရာ ရှိတာတွေအရင်လုပ်ပါတဲ့...
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေး မြို့လုံးကျွတ်ကော်မတီကUN နှင့် INGOs များအပေါ် သဘောထားကြေငြာချက်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/14/20124အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်စုက I do not know တစ်လုံးတည်း ဖြေခဲ့တာမဟုတ်ပါ။
ကာကွယ်ရေးတပ်ဦး(the Islamic Defenders Front (FPI))
အလာအရှင်ရဲ့မြေလို့အဓိပ္ပါယ်ယူထားဆဲ့ Great Father Land ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဟာ ဘင်ဂလီတွေပါ၊
အဲဒီအုပ်စုကအရမ်းကိုအစွမ်းထက်ပြီးလျှို့ဝှက်ပိရိတဲ့ ခရိုနီတွေပါ၊ သူတို့နောက်ကွယ်မှာ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကသူတို့ခိုင်းသမျှဖြစ်နေတယ်၊ သူတို့ဘယ်လောက်ထိလည်သလဲဆိုရင် နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကဘုန်းကြီးတွေကိုပါ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတဆင့်ပိုပိုသာသာ ခြေထိုးပေးကြတယ်၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းကလည်း ဗိုလ်ချုပ်တွေဘက်ကစိုးရိမ်သလိုနဲ့
မသိမသာ မြှောက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်၊ အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ မူဆလင်အစွန်းရောက်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ
သူတို့အုပ်စုတွေကပြည်ပက မူဆလင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး ကြံ့ဖွတ်ဗိုချုပ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး
ပြည်တွင်းကနေအဓိကလှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒါကြောင့်မနေ့ကသတင်းတစ်ခုမှာ ရခိုင်အရေးအခင်းဖြစ်နေချိန် သူတို့လုပ်တဲ့
အိမ်ရာဖွင့်ပွဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေနဲ့အတူတွေ့ရတာ၊ ဒါဟာ အခမ်းအနားဘမ်းပြပြီး လာဘ်ထိုးပြီး
သူတို့လိုချင်တာတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာ၊ ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်တွေကို ဒီဗိုလ်ချုပ်ကကြိမ်းမောင်းခဲ့တာပေါ့၊ အခုလည်း
ဒီကောင်တွေပဲပွဲစားလုပ်ပြီး သူတို့ခါးပိုက်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကို ဒုသမ္မတရာထူးရဖို့အထူးကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတယ်၊ ဒါတွေကိုမဖေါ်ထုတ်
အရေးမယူဘူးဆိုရင် မြန်မာပြည် ၅ပါးမက သံဃာစင်ပါမှောက်တော့မယ်။
(မှတ်ချက်၊ ၄င်းတို့နှင့်နီးစပ်သောအသိုင်းအ၀ိုင်းမှပေးပို့သော ပြည်တွင်းခိုင်လုံသောသတင်းပါ)
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်းမောင်အေးသတင်းဖော်ပြခဲ့သော သတင်းဂျာနယ်နှစ်စောင် ခေါ်ယူသတိပေးခံရ
၂၀၁၂၊ ဇွန် ၁၂ (YPI)
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း မောင်အေး လေဖြတ်ပြီး စင်္ကာပူသို့ဆေးသွားကုသည့်သတင်း ဖော်ပြခဲ့သော ပြည်တွင်းဂျာနယ်နှစ်စောင်ကို စာပေစိစစ်ရေးက ယမန်နေ့က ခေါ်ယူသတိပေးခဲ့သည်။
စိစစ်ရေးက ၎င်းသတင်းကို မဖော်ပြရန်ညွှန်ကြားထားသော်လည်း ဗီးနပ်စ်နယူးစ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းမ် သတင်းဂျာနယ်များက ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့သောကြောင့် ခေါ်ယူသတိပေးခံရခြင်းဖြစ်သည်။
`စိစစ်ရေးကမထည့်ဖို့ပြောထားတာကို ထည့်လိုက်လို့ ခေါ်သတိပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ စိစစ်ရေးက ညွှန်ကြားရေးမှူးကခေါ်သတိပေးတာပါ´ ဟု ရန်ကုန်တိုင်းမ်သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးလှိုင်ဘွားက အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
ဗီးနပ်စ်ဂျာနယ်သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ သတိပေးခံရသည်မှာဟုတ်မှန်ကြောင်းနှင့် စိစစ်ရေးနှင့် သဘောတူညီချက်ရှိသောကြောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို မပြောပြနိုင်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေဆိုသည်။
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း မောင်အေးသတင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အွန်လိုင်းတွင်ရေးသားနိုင်သော်လည်း ဂျာနယ်များတွင် ပုံနှိပ်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ယခင်စာပေစိစစ်ရေးညွှန်မှူးဟောင်း ဦးတင့်ဆွေက သတိပေးထားကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်အယ်ဒီတာတစ်ဦးကပြောသည်။
စာပေးစိစစ်ရေးဆိုသည်မှာ နောင်တွင်ရှိတော့မည်မဟုတ်ဟု ဦးတင့်ဆွေက ပြောခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လမှစတင်ကာ စိစစ်ရေးမူဝါဒများမှာ ပြန်လည်တင်းကြပ်လာခဲ့သည်။
ယခုခေါ်ယူသတိပေးခြင်းမှာ သတင်းမှားဖော်ပြခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စိစစ်ရေးက ဖော်ပြခွင့်မပြုသည်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အရေးခင်းများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သတင်းဓါတ်ပုံများဖော်ပြခဲ့သော လျှပ်တစ်ပြတ် သတင်းဂျာနယ် ကိုထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းပြီး တရားစွဲဆိုထားသည်။ ။
ကျားတွေ အနေ အထိုင် ဆင်ခြင်ရတော့မှာလား
အဘ လို့ ခေါ်ရင်အတိတ်ကလုပ်ထားတာတွေတွေးပြီး....
တိကျခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေနဲ့ ပိတ်ဆို့မှု
အခု ကိုကာကိုလာ ရောက်လာတယ်..။ ဘယ်သူနဲ့ အလုပ်ဖြစ်သွားသလဲ..။ လေ့လာကြည့်ပါ..။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေထဲက ထိပ်တန်းအခွန်ဆောင်ထားသူ ဘယ်သူရှိမလဲ..။ နောက်ကျရင် ..ကိုကာ ကိုလာကိုယ်တိုင် အခွန်ရှောင်တတ်ပြီပေါ့..။ အဲဒီလိုမျိုးကုမဏီတွေ ဘယ်နှစ်ရာလောက် ဖြစ်လာမလဲ....။. ဘယ်မလဲ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ..။
နောက်တစ်ချက်က နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေ အခုထက်ထိ ပြန်ဌာန်းပြီးပါပြီလား..။ အခု မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ရောက်လာကြတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတိုင်းက တိကျခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေမရှိပဲ ကြေညာချက်တွေနဲ့လုပ်နေရလို့ နောက်ဆုတ်နေခဲ့တာကို UMFCCI ဥက္ကဌ ဦးစိုးသိန်းကိုယ်တိုင် ၀န်ခံခဲ့တာ လပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်..။
အဲဒါ .. ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ..။
လက်ရှိ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချိန်မှာ/ ဥပဒေခိုင်မာမှုမရှိချိန်မှာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အလုပ်သမားပြဿနာ..။ ဘဂတိလိုက်စားမှုပြဿနာ၊ အခွန်ရှောင်မှု ပြဿနာတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍက ကိန်းဂဏန်းအရက လွဲလို့ ဘယ်လောက်အထိ အကျီုးဖြစ်ထွန်းသွားသလဲ..။
အခု ပြည်တွင်းက စီးပွားရေးသမားတွေ လယ်တွေသိမ်းနေတယ်..။ အခုထက်ထိ ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီး မဖြေရှင်းနိုင်ကြသေးဘူး..။ စီးပွားရေးပွင့်လာရင် ပြည်ပခရိုနီတွေ ဒီထက်အဆပေါင်းများစွာ လယ်တွေကိုသိမ်းမယ်..။ ဌာနဆိုင်ရာရဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ ဥပဒေတွေကြောင့် အသိမ်းခံရဦးမယ်..။ ဆန္ဒပြပွဲတွေ များစွာ ထပ်ဖြစ်လာမယ်..။ ဘယ်မှာလည်း ပြည်သူ့အတွက်.. ခိုင်မာတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေ....။
ဟိုတယ်တွေကိုကြည့် . ဥပဒေခိုင်ခိုင်မာမာမရှိလို့ အခုနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက်ရင်းလာပြီး အရှုံးမခံနိုင်လို့ ... အခန်းခတွေ မတန်တဆတက်လာတယ်..။ အရင်ကတည်းက ဥပဒေ မရှိလို့ ကြေညာချက်နဲ့ တားယူနေရတယ်..။ ဘယ်မှာလည်း ခိုင်မာတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဥပဒေ..။
ဒါ ... ဥပမာ ပါးပါးလေးပဲ.....။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတော့ ပွင်လာပါရဲ့ .. ဒါပေမယ့် မိုးမျှော်တိုက်တွေ၊ နိုင်ငံခြားပိုင် စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေကြားထဲမှာ Rule Of Law မရှိ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှုမရှိပဲ. ကိုယ့်တိုင်းရင်းသူတွေ ဖာတွေဖြစ်.. တိုင်းရင်းသားတွေ သူတောင်းစားတွေဖြစ်နေပြီး လူတန်းစားစုတ်ပြတ်စွာကွာဟမှုနဲ့ ခရိုနီတွေ ချမ်းသာတာကို ငုတ်တုတ်ထုင်ကြည့်ရမယ့် မခိုင်မာတဲ့... ကော်ပိုရိတ်တွေချမ်းသာ၊ ပြီး ပြည်သူဆင်းရဲတဲ့ အရင်းရှင်ပုံစံ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို လက်ခံချင်ရင် ....
ဒေါ်နန်းဝါနု အဆိုကို ထောက်ခံကြပါ...။
အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား သို့ နိုင်ငံရေး ပါတီ တစ်ပါတီလျှင် ၅ဦး တက်ရောက် ခွင့်ရရှိ